Hello Nepal News » कोपाको फाइनलमा भिड्ने भएपछि मेस्सी र बार्सिलोनालाई गार्सियाको ‘व्यंग्यात्मक सन्देश’ !
कोपाको फाइनलमा भिड्ने भएपछि मेस्सी र बार्सिलोनालाई गार्सियाको ‘व्यंग्यात्मक सन्देश’ !
जारी सिजन २०२०–२१ अन्तर्गत स्पेनिस कोपा डेल रे कप फुटबलको फाइनल खेलमा बार्सिलोना र एथ्लेटिक बिल्बाओ भिड्ने भएका छन् । सेमिफाइनलका खेल सकिएपछि यी दुईको फाइनल भेट पक्का भएको हो । सेमिमा बार्सिलोनाले सेभिल्लामाथि ३–० को कमब्याक जित निकाल्दै फाइनल पुग्दा बिल्बाओले लेभान्टेलाई एग्रीगेटमा ३–२ ले हराउँदै फाइनल पुग्यो । दुवै टिमले एग्रीगेटमा समान ३–२ को जित निकाले । अब कपको फाइनल खेल आगामी अप्रिल १७ तारिखमा हुनेछ । बार्सिलोना यो उपाधि सर्वाधिक ३०औं पटक जित्ने टिम हो भने बिल्बाओले कूल १९ पटक जितेको छ । बिल्बाओ गत सिजन पनि कोपाको फाइनल पुगेको थियो । तर, कोरोना भाइरसका कारण गत सिजनको फाइनल खेल नै हुन पाएन । बिल्बाओ लगातार दोस्रो सिजन पनि फाइनल प्रवेश गरेको छ । बार्सिलोना भने पछिल्ला १३ सिजनमध्ये १०औं पटक फाइनल पुग्न सफल भएको हो ।
कपको फाइनलमा बार्सिलोनासँगको भेट पक्का भएपछि बिल्बाओका कप्तान राउल गार्सियाले बार्सिलोना र सो टिमका कप्तान लिओनल मेस्सीलाई चेतावनीमूलक सन्देश दिएका छन् । ‘मार्का’सँग कुरा गर्दै उनले बार्सिलोनासँगको कप फाइनल ‘आफूहरूका लागि सहज’हुने बताएका छन् । गार्सियाका अनुसार बिल्बाओले कपको फाइनल रियल मड्रिडसँग खेल्नु नपरोस् भन्ने चाहेको थियो । तर, आफ्नो प्रतिस्पर्धी बार्सिलोना पर्दा राहत महसुस गरेका धारणा उनले राखेका छन् । उनले व्यंग्यात्मक रूपमा फाइनल चरण खेलमा रियल मड्रिडभन्दा भन्दा बार्सिलोना कम खतरापूर्ण हुने बताएका हुन् । बार्सिलोनासँग उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु परेपछि आफ्नो टिम खुसी भएको उनले बताएका छन् । आफ्नो टिम कपको फाइनल खेल्न निकै उत्साहित भएको पनि गार्सियाले बताए ।
‘हामीले कपको फाइनल रियल मड्रिडसँग खेल्न चाहेका थिएनौं । उनीहरू चाँडै आउट भए । तर, हामी कुनै पनि प्रतियोगिताको फाइनलमा रियल मड्रिड प्रतिस्पर्धी चाहँदैनौं । किनभने, फाइनल खेलमा उनीहरू सबैभन्दा खतरनाक टिम हुन् । जब रियल फाइनल पुग्छ, उनीहरूले ९९ प्रतिशत उपाधि जितेरै छाड्छन्,’ गार्सियाले भनेका छन्, ‘यसपटक कपको च्याम्पियन बन्न बार्सिलोना प्रतिस्पर्धी पाएका छौं । उनीहरूसँग फाइनल खेल्नु कम जोखिमपूर्ण हुन्छ । जब बार्सिलोना सेभिल्लालाई हराएर फाइनल पुग्यो, हामी खुसी भएका थियौं । त्यसै पनि बार्सिलोनासँग हाम्रो अनुभव राम्रो छ । उनीहरू एक बलिया टोली हुन् । तर, हामी ज्यादा खतरापूर्ण मान्दैनौं । यो टिमविरुद्ध कसरी एक बौद्धिक खेल खेल्नुपर्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ । च्याम्पियन जो पनि बन्न सक्छ । अथवा, उनीहरू नै बन्लान् । तर, हामी सजिलै त्यसो हुन दिनेछैनौं ।’
तर, गार्सियाले मेस्सीको प्रशंसा गर्न भुलेनन् । सँगै, उनले मेस्सीलाई चेतावनीमूलक सन्देश पनि दिएका छन् । गार्सियाका अनुसार मेस्सी हुँदा र न हुँदा बार्सिलोनाको टोली र प्रदर्शनमा ठूलो फरक पर्छ । तर, मेस्सीसहितको टिमलाई पनि आफूहरूले हराएको सम्झिँदै गार्सियाले बार्सिलोनामाथि आफूहरूले अर्को राम्रो खेल प्रस्तुत गर्ने बताएका छन् । ‘लिओनल मेस्सीप्रति मेरो सम्मान छ । उनी विश्वका उत्कृष्टमध्येका एक हुन् । उनी हुँदा र नहुँदा बार्सिलोनाको प्रदर्शनमा ठूलो फरक पर्छ । तर, हामीले मेस्सीसहितको बार्सिलोनालाई पनि हराएका छौं । हामीलाई कपको फाइनललाई लिएर कुनै डर छैन । बरु, हामीले बार्सिलोनालाई कम जोखिमपूर्ण टिम ठानेका छौं,’ गार्सियाले भने, ‘हामी लगातार दोस्रो वर्ष कपको फाइनल पुगेका छौं । तर, यसपटक हामी यो उपाधि जित्न चाहन्छौं । हाम्रा लागि यसको महत्त्व ठूलो छ । हामी फाइनलमा मेस्सीसहितको बार्सिलोनासँग खेल्न चाहन्छौं ।’
बार्सिलोना र बिल्बाओबीच भएका पछिल्ला तीन खेलमध्ये दुई खेल बार्सिलोनाले जितेको छ भने एक खेल बिल्बाओले जितेको छ । तर, बार्सिलोनाले लिग खेलमा जितेको छ भने बिल्बाओले भने उपाधि भिडन्तमा जितेको छ । गत जनवरी ७ मा ला लिगामा भएको खेलमा बार्सिलोनाले बिल्बाओलाई उसकै घरमा २–३ ले हराएको थियो । त्यसपछि गत जनवरी १८ भएको स्पेनिस सुपर कपको फइनलमा बिल्बाओले बार्सिलोनालाई नाटकीय रूपमा २–३ ले हराएर उपाधि जितेको थियो । सो खेलमा बार्सिलोनाका कप्तान मेस्सीले रातो कार्ड पाएका थिए । त्यसपछि अस्ति भर्खर फेब्रुअरी १ मा ला लिगामै यी दुई टोली भिड्दा बार्सिलोनाले आफ्नो घरमा २–१ को नतिजा निकालेको थियो । अब यी दुई टोली कपको फाइनलमा खेल्नेछन् । यो खेल त्यही मैदानमा हुनेछ, जहाँ बिल्बाओले कपको फाइनलमा बार्सिलोनालाई हराएर उपाधि जितेको थियो ।
प्रकाशित मिति २२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १३:५७